Jowlo Dacwi ah oo uu horkacayo Sh C/raxmaan Abyad oo ka ambabaxday Copenhagen.[Daawo]
Odense:-Wafdi uu hogaaminayo Sh C/Raxmaan Abyad ayaa socdaal dacwo shalay ugu baxay gobalada dalka Denmark waxaana uu Sheekhu ka anbabaxay magaalada Copehagen ee xarunta dalka Denmark. Sheekh C/raxmaan abyad iyo ducaada la socotay ayaa waxaa ay ku hormareen magaalada Odensa oo ah magaalada 4aad ee dalka Denmark waxaana halkaas nagu soo dhaweeyey culumada iyo ducaada magaalada Odense oo ay horkacayaan maamulka Masjidka Iqra ee magaalada Odense .
Markii aan soo gaarnay Masjidka Iqra ee magaalada Odense ayaa waxaan kulan soo dhaweyn iyo kala warqaadasho la qaadanay Maamulka Masjidka Iqra oo ay horkacayeen Mahdi Mooge, Yaasir Xasan Yuusuf Abu Camaar. Xusen Maxmed Cali .
Intaas ka dib ayaa waxaa uu Sheekh C/raxmaan Abyad ka jeediyey Khudbadii Jimacaha ee Masjidka Iqra wuxuuna khudbadiisa uga hadlay dulmiga iyo alle ka cabsiga . ka dib waxaana gaarnay magaalada Aarus ee caasimada labaad ee dalka Denmar waxaana na soo dhaweeyey ducaada iyo culumada Masjidka Al-Taqwa waxaana cinwaanka muxaadarada uu sheekhu jeediyey cinwaankeeda uu ahaa cudurada qalbiga
Waxaan xalay wafdiga uu hogaaminayo Sh C/raxmaaan Abyad alaha dhowree ay soo gaareen magaaalada Aalborg waxaana halkaas ku soo dhaweeyey culumada iyo Ducaada Masjidka Al-Furqaan.
Sheekh ayaa waxaa uu duhurkii ka dib muxaadaro u galay duwanka taas oo haatan socota waxaa kale oo uu Sh C/raxmaan Abyad Muxaadaro ka jeedin doonaa raga bacda salaatul Maqrib hadii alle idmo.
Sheekh C/raxmaan abyad iyo wafdiga ducaada ee la socda ayaa waxaa ay saaaka u baqooleeen magaalada Slegelse waxaana uu ka jeedin doonaa muxaadaro bacda salaat duhur .
Hoos ka Daawo Khudbadii Jimce ee Masjidka Iqra Odense Sh C/raxmaan Abyad
232,093 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress